Ogaden News Agency (ONA) – Madaxwaynaha Somaliya oo Kahadlay Doonta Hubka Siday oo Badda Somaliya Lagu Qabtay.
Madaxwaynaha Somaliya oo Kahadlay Doonta Hubka Siday oo Badda Somaliya Lagu Qabtay.
Kadib markii uu soo shaac baxay warka Markab laga leeyahay Faransiisku in uu qabtey dooni aan lahayn sumad oo wadey hub aad u badan kaasoo loosoo waday dalka Soomaaliya, ayaa waxaa ka hadley Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, oo ku tilmaamay talaabo wanaagsan oo dalalka saaxiibada la ah Soomaaliya ay qaadeen.
Madaxweynaha ayaa ku tilmaamay in ujeedada hubkan ay tahay in colaad iyo xasilooni-darro dalka looga abuuro. “ Waa war lagu farxo in ciidammada dalka Faransiiska ay gacanta ku dhigeen doon sidday shixnad hub si sharci-darro ah la doonayay in waddanka lasoo geliyo. Waa hubaal in hubkaas uu ku socday kooxaha qas-wadeyaasha ah. Waxaan iyana bogaadinayaa ciidammada Australia oo dhowaan gacanta ku dhigay shixnad kaloo hub ah oo loo soo wadey Soomaaliya ”.
Madaxweynaha ayaa sheegay in tallaabada ay qaadeen Faransiiska iyo Australia ay gacan ka gaysaneyso xasiloonida gobolka. “ Hawlgalkan ay ciidammada Australia iyo Faransiiska kusoo qabteen shixnadahan hubka ah waxay xoojineysa qaraarkii kasoo baxay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay oo tirsigiisu ahaa 2244 (2015) ee cunaqabateynta hubka, kaasoo gacan ka geysanaya xasiloonida Soomaaliya iyo gobolka intiisa kale. Tallaabadan waa mid ku dayasho mudan oon filayno in dalalka kale ay iyaguna ku dhaqaaqi doonaan ”.
Madaxweynaha ayaa si dadban ugu eedeeyey in hubkan loo wadey ururka al-Shabaab, waxaana uu baaq u diray beesha caalamka. “ Waxaan ugu baaqayaa beesha caalamka inay sii wadaan hawlgalladan looga hortagayo hubka sida sharci-darrada ah dalka ugu soo qulqulaya, si uu u najaxo barnaamijka Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ee nabadda, xasiloonida iyo ciribtirka kooxda argagixisada ee Al Shabaab ” ayuu yidhi.
Doonta Faransiisku qabtey ayaa ah tiii labaad muddo bil ah gudaheed, horey ayaa Ciidanka Australia u qabteen doon wadey hub ka badan gaaraya 2000 oo qori, kaasoo loo wadey sida wararku sheegayaan Ururka al-Shabaab ee ka dagaalama Bariga Afrika.
Qaramada Midoobey ayaa Soomaaliya kusoo rogtey xayiraad hubka ah sanadkii 1992, tan iyo markaas waxaa dalka si weyn ugu soo qul-qulaayey hubka noocyadiisa kala duwan, dalalka ugu badan ee hubka soo geliyey Soomaaliya ayaa ah kuwa deriska la ah Somaliga gaar ahaan Itoobiya oon marnaba raali ka ahayn in qarankii Somaliya uu dib usoo laabto.